We Fight We Win. -- " More than Media ": ပျော်စေပျက်စေ
ဗျို့ ကိုမီးသိုး ဆိုတဲ့ မို့သီ
ခင်ဗျား တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကလစ်က ကနေဒါနိုင်ငံ မွန်ထရီးမြို့မှာ ရိုက်တဲ့ လျှပ်တပြက်ဟာသပြကွက်ပါ။ တကယ့်ရဲတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ လူရွှင်တော်တွေပါ။ ခင်ဗျား ဘလော့မှာ ဒီလိုတင်ထားတော့ ကြည့်တဲ့ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကို သို့လောသို့လော မြှောက်ပေးနေတာမျိုးဖြစ်မနေဘူးလား။ ခင်ဗျား လံကြုတ် လုပ်ကြံမလုပ်နဲ့နော်။ ညစ်တီးညစ်ပတ် မလိမ့်တပတ်လုပ်တာမကောင်းဘူး။ ၈၈ တွေခင်ဗျားကြောင့် သိက္ခာကျတော့မယ်။
မင်း က လဲ ဦးဏှောက်တော်တော်မရှိတဲ့ကောင်ပဲ ကိုမိုးသီး အဖွဲ့ က ဟာသ တင်ထားတာတောင်မှာ နားမလည်တဲ့ကောင်ပဲ။ သူတို့ ရေးထားတယ်လေပျော်စေပျက်စေ လို့ ရေးထားတာ သဘောမပေါက်ဘူးလား။
ဟာသအဖြစ်သူတို့ တင်ထားတာကို သဘောမပေါက် ကနေဒါကို ဘယ်ဒုက္ခသည်စခန်းကနေ လိမ်တင်ပြီးရောက်လာသလဲ ။
Hey 2nd Son of Bitch Anonymous and 3rd Son of Bitch Anonymous -
Don't you see your step-father Moe Thee wrote like this: "Police Power Abuse On Camera"
I am notarefugee. I am just Myanmar citizen living officially in Canada coming from Yangon Airport.
ကနေဒါက ဆိုတဲ့သူကဆောက်ရူးပဲ။ ဦးဏှောက်တော်တော်မရှိတဲ့သူပဲ ။
ရဲအဖွဲ့ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တာ ဆိုတာ
ရေးထားတာ။ တကယ်ကြည့်တော့ ဟာသ
Prank လုပ်ထားတာ။ Prank ဆိုတာ အတည်ပေါက်နဲ့ ဟာသလုပ်တာ။ ကြည့်တဲ့လူတိုင်း
ကိုမိုးသီးတို့ အဖွဲ့ က ဟာ သအဖြစ်တင်ပေးထားတာ ။ ရှင်ဘယ်လို လုပ်ပြီး ကနေဒါကိုရောက်လာတာလဲ ဆောက်ထုံ။
ခြောက်ကြိုး ။ ရှင် ဟာ စောမကြည်၊ပုံမလာ
ညဏ်မရှိတဲ့ အွန်လိုင်းဖွန် ကြောင်ကြီးပဲဖြစ်မယ်။